Shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo kusoo biireysa suuqa duulimaadka Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo kusoo biireysa suuqa duulimaadka Somalia
Mareeg.com: Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa ku heshiiyey in shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ay duulimaadyo toos ah ku tagto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Wasiirka gaadiidka Duulista Hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamaca “Jangeli” ayaa faah faahin ka bixiyay heshiis dhanka duulimaadka ah oo ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo dowlada Qatar, kaasoo la xiriiro dhanka duulimaadka ah.
Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawada ayaa sheegay in heshiiska dhinaca duulista hawada ee ay kala saxiixdeen Dowladaha Qatar iyo Soomaaliya uu suura gelin doono in diyaarada Qatar Airways ay duulimaadyo toos ah ku timaado Muqdisho iyo Doha.
Shirkadda Turkish Airways oo horay duulimaad caalami ah uga bilowday Soomaaliya ayaa heshay macaamiil badan, taasoo keentay in shirkado kale ku daysadaan.